musha United Kingdom Singers Dua Lipa Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Dua Lipa Biography inoratidza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mukomana / Murume Kuti ave, Mararamiro, Net Kukosha, uye Hupenyu Hwega.
Zvichitaurwa zviri nyore, tinokupa iwe nerwendo rwemuimbi rwehupenyu, kubva pamazuva ake ekukura, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Kuti urondedzere hupenyu hwako hwekuda kudya, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - pfupiso yakakwana yeDua Lipa Bio.
Iyo Biology pfupiso yaDua Lipa. Tarisa hupenyu hwake uye Simuka.
Ehe, munhu wese anoziva izvozvo ari kuchinja mitemo yePop Music. Nekudaro, vashoma chete vevateveri vake vane ruzivo rushoma nezveMemoir yake, iyo inonakidza kwazvo. Pasina yakawanda ado, ngatitangei.
Dua Lipa Zvevacheche Nyaya Yenyaya:
Kutanga kuenda, iye ane zita remadunhurirwa rekuti "Dula Peep". Dua Lipa akazvarwa pazuva re22nd raAugust 1995 kuna amai vake, Anesa Lipa nababa, Dukagjin Lipa, muLondon, England.
Ndiye wekutanga pavana vatatu akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, inoratidzwa pazasi.
Sangana nababa vake vakanaka, Dukagjin uye amai vakanaka, Anesa Lipa.
Kubva chaipo pamazuva ake ehudiki, muimbi aifarira kutenderedza baba vake. Kare kumashure, aiteerera chinyararire kurira kwegitare rake sezvaanodzidzira yake inotevera show. Sezviri pachena, aive zvakare ari rockstar ane hupenyu hwemimhanzi hwakakonzera kuda kwaLipa.
Dua Lipa Kukura Mazuva
Muimbi anouya akarererwa pamwe nevanin'ina vake (Rina naGjin) kwaakaberekerwa. Kukura mumhuri yakazvipira kumimhanzi, Lipa akarota hope yekuva muvaraidzi sababa vake.
Nekuda kwesarudzo yake yekupinda munyika yevaraidzo, akatanga kuimba pazera diki re 5. Chokwadi, aive mwana anoshamisa anotamba nziyo dzake kunyangwe asina anoridza chiridzwa.
Kunze kwekudzidza kuimba, Lipa akapedza mamwe mazuva ehudiki hwake achitarisira ganda rake. Pane nguva dzaaimboita chinyararire kuyedza makemikari akasiyana pachiso chake.
Mufananidzo usingawanzo weyekuuya pop nyeredzi akapfeka zvigadzirwa.
Dua Lipa Yemhuri Mhemberero:
Chinhu chinonakidza pamusoro paDula Peep ndechekuti iye anobva kumhuri ine nhaka yeIslam. Kunyangwe yake yemumhuri yeMuslim, Lipa anoita kunge asingataure zvakawanda nezvechitendero.
Kugona kunakirwa katatu chikafu uye kuenda kuchikoro chinoshamisa kwaive chikamu cherubatsiro rwake mukukura mumhuri yepakati-yepakati. Hongu, vabereki vake vakawana mari yakati rebei, izvo zvakavabatsira kugara semhuri yepakati.
Dua Lipa Mhuri Yakatangira:
Nezvekodhi, madzitateguru aLipa anoteedzerwa kuPeja, iro rechina rine vanhu vazhinji veKosovo. Kwaanobva kunonyanya kugarwa nevanhu veAlbania Ethnicity.
Nyika yake ndiyo yechipiri nyika diki kwazvo pasi (sa2021).
Unoziva?… Republic of Kosovo inzvimbo inozivikanwa kuodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweEurope, iyo yakaburitsa pachena nyika yayo kuzvimiririra kubva kuSerbia muna2008.
Zvinosuruvarisa kuti nzvimbo yake yeKutanga yakasangana nenguva dzinoshungurudza munhoroondo yayo.
Zvizhinji zvezviitiko zvinosuwisa zvakaitika muma1990 uye zvakatora hupenyu hwakawanda nepfuma. Munguva yekusagadzikana kusingaperi, vabereki vaLipa vakagara munharaunda yevapoteri yeAlbania muCamden, London. Kutarisa mumadzitateguru ake amai kunoratidza kuti ndewekwaBosnia.
Dua Lipa Dzidzo:
Paakasvika pazera rekugamuchira dzidzo yepamutemo, vabereki vake vakamuti anyore kuFitzjohn's Primary Chikoro. Ikoko, akadzidza nesimba uye akatora zvidzidzo zvemimhanzi, kunyanya muCello.
Tarira iko kutanga kwaakadzidza uye akagamuchira dzidzo yake yekutanga.
Hazvina kumutorera nguva yakawanda asati agadzirisa purogiramu yake yekudzidza. Netsaona, Lipa akagumburwa nekwaya yechikoro chake achidzidzira rwiyo.
Akakandirwa mune imwe nguva yemafaro apo ainakidzwa nekamwe kamumhanzi kavakaburitsa.
Maminetsi mashoma akapedzwa pakati pemanzwi engirozi akadaro aive akakwana kumunyengetedza kuti apinde mukwaya. Zvinosuruvarisa, chimiro chaLipa chakakandirwa mumakakatanwa panguva yekuongorora kwake apo mudzidzisi wake akazevezera mazwi "Haugone kuimba".
Kurwisa Kusava netariro:
Panzvimbo pekuchema pamusoro pemashoko emudzidzisi wake, Lipa aive akatsunga kuratidza kuti ainyepa.
Paakasvika kumba, akaendesa zviitiko zvese kuna baba vake naamai vake, avo vakamunyaradza ndokumuisa muSylvia Young Theatre Chikoro (chikoro chekuimba kupera kwevhiki).
Mushure mekuziviswa kwekusununguka kwaKosovo, mhuri yemhizha yakadzokera kuPristina muna 2008. Ikoko Lipa akasvika pakudzidza zvakawanda nezvekwake uye mutauro weAlbania.
Akatoshamisa vadzidzisi vake vatsva uye vaaidzidza navo mukonzati yechikoro sezvo aifukidza zvakanaka imwe ye Alicia Keysrwiyo - "Hapana".
Dua Lipa Kwekutanga Basa Rehupenyu:
Makore maviri mushure mekunge mhuri yake yatamira kuPristina, mudiki lass akakurukura ramangwana rake nababa naamai vake. Akavaudza nezve mafambiro aanoda kuita basa renguva yakazara mumimhanzi.
Mushure mekukakavadzana kudiki, vabereki vake vakabvuma chisarudzo chake. Nekudaro, Lipa ane makore gumi neshanu akadzokera kuLondon mu15.
Sechirongwa chekutanga chekukunda nyika yevaraidzo, Dula Peep akapinda ese maviri eParamende Hill Academy (yeA-Levels yake) uye Sylvia Young Theatre Chikoro. Munguva iyi, akatanga kurodha nziyo dzake paYouTube uye SoundCloud.
Sezvineiwo, akakurumidza kuwana mukurumbira mudiki uye akatanga kuita modelling neTopshop. Nerombo parutivi rwake, akaisa basa remuimbi mushambadziro yeiyo The X Factor muna2013.
Mufananidzo unokanda unoratidza runako rwake runoshamisa semuenzaniso.
Dua Lipa Biography - Iyo Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Ehezve, kubatanidzwa kwake nemasangano akasiyana evaraidzo hakuna kumutadzisa kushanda sahweta mubhawa. Pasina nguva refu, Lipa, nerombo rakanaka, akasangana naMawson waakanyora naye rwiyo "Hotter kupfuura Hell".
Muna 2014, akatanga kuwana kuzivikanwa kwaanokodzera sezvo akasaina kondirakiti naWarner Bros. Records.
Kubudirira kwake kukuru kwakauya mushure mekunge aburitsa mukadzi wake wekutanga - Rudo Rutsva. Iyo track yakatowana yake yakanaka kuongororwa uye kuenzanisa nayo Lady Gaga.
Iyo yekuvharika pikicha yake yekutanga kuroorwa kusunungurwa.
Dua Lipa Biography - Kubudirira Nyaya:
Ne kufambira mberi kweiye wekutanga kuroora, pakanga pasina muganho kune izvo zvaaigona kuzowana mune ramangwana. Nekudaro, Lipa akatanga kutyora marekodhi mazhinji nekuburitsa maalbham ayo akaenda nehutachiona uye akasvikira pamapuratifomu anozivikanwa senge Billboard Hot 100 chati.
Pandinonyora iyi Biography, MAZUVA anomuisa zita rekuti pop nyowani nyowani, anova asingazivikanwe.
Hongu, tarenda rake mumimhanzi rakamupa mibairo makumi masere nemasere (kusanganisira 81 Grammy) uye 3 mazita kubva muna 238. Vamwe vese, sekutaura kwavo, inhoroondo.
Kuhwina Mubairo weGrammy kwakaratidza imwe yenguva dzinofadza kwazvo muhupenyu hwake pamwe neiyo yemhuri yake.
Ndiani Dua Lipa Mukomana / Murume Kuti Ave?
Vazhinji vateveri vangangofunga kuti chinzvimbo chake muindasitiri yevaraidzo chaizoda kuti afambidzane nemukurumbira.
Nekudaro, Lipa akashamisa munhu wese paakatanga kudanana naIsaac Carew - shefu - mu2013. Zvinosuruvarisa, hukama hwake naIsaka hwakanga husina kunyanyisa uye hwakagara chete makore mana vasati varambana mu4.
Chiono chenguva pfupi, inofadza nguva yaakave naIsaac Carew.
Mumwedzi isingasviki mitanhatu, Lipa akaenderera mberi nehupenyu ndokutanga kufambidzana naPaul Jason Klein, mutungamiri-muimbi weLANY. Zvakare, hukama hwake naPaul hwakakanganisika mushure memwedzi mishanu.
Zvese zvaakaita kwaive kutendeukira kune waimbova mukomana wake kuti anyaradzwe. Akapedzisira ayanana naIsaac, uye yavo nyaya yerudo yakaramba ichienderera kusvika Chikumi 2019.
Kunyangwe paine kurwadziwa pamoyo kwakawanda, iyo superstar yakaramba yakabata musoro wayo yakanangana nekutsvaga mweya wemurume wayo.
Maiwe, akadanana naAnwar Hadid, modhi uyo ane makore mana mudiki kwaari. Hupenyu hwake hwehukama hwakazove neyakaenzana, sezvo vaviri vacho vakatanga kudanana mu4.
Mushure mekusuwa kwemoyo kuzhinji, akazowana muchinda wake achifadza (Anwar Hadid).
Dua Lipa Hupenyu Hwega:
Neye ake meteoric kukwira kune mukurumbira, iwe unogona kuyedzwa kubvunza; Ndiani Dua Lipa ari kure nebasa rake rekuimba?
Kutanga, ane hunhu hwerudzi rweLeo Zodiac hunhu. Humwe hunhu hunoratidza hunhu hwake kugona kwake kufungidzira mamiriro ezvinhu nehukama uye hutano.
Kana zvasvika pakutandara, Lipa anofarira kushandisa nguva padziva. Sezviri pachena, iye ane tarenda kushambira senge Julia Rose. Iwe ungazopedzisira wafunga kuti iye mutambi nyanzvi mushure mekuona clip iri pazasi.
Dua Lipa Mararamiro Echokwadi:
Kuona kuti ane zvakawanda zvekugona kupfuura ngano senge Adele, ingori nyaya yenguva Lipa asati awedzera mubairo wake. Pandinonyora iyi Biography, takafungidzira iye Net Kukosha kuve mari inokwana yemamiriyoni gumi nematanhatu emadhora.
Sezvineiwo, mudhara anotenda kuti anokodzera kunakirwa nemubhadharo unouya kubva mukumhanya kwake.
Nekudaro, anorarama hupenyu hwoumbozha. Mufananidzo uri pazasi unoratidza imwe yemota dzake dzekunze uye kuona kweye yake $ 1 miriyoni yeimba.
Izvo zvinodikanwa kuti anakirwe nekutenderera kubva kumakore ake mazhinji ekushanda nesimba.
Dua Lipa Mhuri:
Iko hakuna chinhu chakakosha sekuchengetedza mukurumbira weveimba yake mune yemimhanzi nyika.
Ehe, chishuwo chaLipa ndechekuchengetedza nhaka yemhuri yake iri mhenyu. Nekudaro, isu tinokupa iwe ine inonakidza chokwadi pamusoro pababa vake, amai uye vanin'ina.
Iye anogara mumhuri inoyevedza nucleated.
Nezve Baba vaDua Lipa:
Zviripachena kuti akawana tarenda rake kubva kuna Dukagjin Lipa (baba vake). Iye ndiye Mutungamiriri weSunny Hill Foundation, pamwe nemuvambi uye CEO wesangano rekutaurirana.
Sangana nababa vake vakanaka, Dukagjin Lipa. Chokwadi, iye ane chikwereti kuna baba vake chikuru kuvonga nekuda kwechitarisiko chake chakanaka.
Sezvineiwo, baba vaLipa vane runako pasina mubvunzo uye vakwezva kutarisisa kwakanyanya kubva kumufeni wavo semuvaraidzi.
Chaizvoizvo, ndiye gitare uye anotungamira muimbi weKosovan rock band Oda. Panguva yekunyora iyi Bio, Mr Dukagjin ane vangangoita mazana maviri evateveri pane yake Instagram account.
Nezve Amai vaDua Lipa:
Kubva pakuonekwa kwezvinhu, Dula Peep ane pfungwa yakasimba yekuvimba naamai vake. Nhanho yega yega yaanotora muhupenyu hwake hwebasa inodzokorodza zvimwe zvezvidzidzo zvaakange ave kudzidza achipedza nguva naamai vake.
Sezvineiwo, Lipa naamai vake vanogadzira timu inotyisa yemategi kana zvasvika kune hunyanzvi hwekutora mifananidzo.
Sangana naamai vake vanoyevedza, Anesa Lipa. Zvinoita kunge vaviri vacho vane pfungwa huru yemafashoni.
Nezve hama dzaDua Lipa:
Hupenyu hungadai hwakazadzwa nekufinhwa kana iye muenzi asina mumwe wekusanganisa naye kunze kwevabereki vake.
Hongu, Lipa ane vanin'ina vaviri vaanokoshesa zvakanyanya. Iye anofarira kushanya kumahombekombe pamwe nehanzvadzi yake, Rina, uye mukoma, Gjin, pese paanenge asina kunyanya kubatikana.
Kuda kwake mukoma nemunin'ina uye hanzvadzi hakuna anoziva kusungwa.
Munhu wega anomira pakati pehama dzake ndisekuru vake baba, Seit Lipa.
Paaive achiri mupenyu, aive munyori wenhoroondo akatungamira iyo Bosnian Institute of History. Panga pasina ruzivo nezvevamwe vasara vehama dzake, kusanganisira babamunini naamaiguru.
Kushandisa imwe isingakanganwike nasekuru vake chipo chisingawanzo kuwanikwa naLipa.
Dua Lipa Chokwadi:
Kuputira iyo Hupenyu hwepopstar's Hupenyu Nyaya, hezvino zvimwe chokwadi chingakubatsire iwe kubata iye Biography zvakakwana.
Chokwadi # 1: Dua Lipa Tattoos:
Semunhu ane mukurumbira, Dua Lipa akapinda munyika yeinking. Panguva yekutsikisa iyi Bio, akaisa inki pamusoro pematato gumi nematatu pamuviri wake.
Chikamu chega chega cheumhizha chine zvarinoreva zvakasiyana. Pazasi peimwe yematatoos anonyanya kuzivikanwa pakati peainyora - rosi rakamiswa padivi remukati meiyo kurudyi Bicep.
Tarisa mumwe wake weti yakanaka tatoo inked pane bicep yake.
Chokwadi # 2: Mhuka dzinovaraidza:
Lipa ine nzvimbo yakapfava yembwa. Sezvineiwo, iye nemukomana wake (Anwar) vakatora mbichana mbichana iyo yavakatumidza kuti Dexter.
Pamwe chete vakachengeta imbwa uye vakaifarira. Shure kwaizvozvo, vateveri vakatanga kuvadana sevabereki vaDexter.
Kuda kwake imbwa hakugone kusimbiswa. Ehezve, iye nemukomana wake vanofarira kutora pikicha naDexter.
Chokwadi # 3: Dua Lipa Chitendero:
Sezvambotaurwa, Lipa akakurira muMhuri yeIslam Mhuri. Nekuda kwekuzvarwa kwake, iye muMuslim. Nekudaro, muimbi akachengeta chimiro chake chechitendero pane yakaderera-kiyi kubva paakatanga kuve nemukurumbira.
Chokwadi # 4: Kusvuta uye Kunwa Tsika.
Kune vakomana vashoma vakakurumbira vasingapi mhosva pamhedzisiro yekusvuta, uye Lipa mumwe wavo.
Anowanzotutuma mudzanga pese paanowana mukana. Nekudaro, muna Kubvumbi 2020, Dula Peep akaburitsa pachena kuti akacheka kuputa uye kunwa kusvika kune shoma barest kuchengetedza izwi rake.
Haana kunyunyuta nezvekusvuta midzanga.
Chokwadi # 5: Dua Lipa Kuonekwa muFIFA 21:
Zvakaburitswa muna2020 kuti nyeredzi yepop ichawedzerwa pane runyorwa rweFIFA 21 mavara anotamba.
Uku kukura kuchapa vazhinji vevateveri vake mukana wekutamba nhabvu mitambo naye pakati pevatambi venhabvu venhabvu.
Tarisa mufananidzo mupfupi wezvaanotarisa uye kugona muvhidhiyo pazasi.
Dua Lipa Wiki Tafura:
Tisati tazopedzisa yedu Biography yeiyo superstar, tarisa nekukurumidza pfupiso yeHupenyu Hwake Nyaya.
Zita rizere: Dua Lipa
Zita rekudanwa: Dula Peep
Nzvimbo yekuzvarirwa: London, England
Baba: Dukagjin Lipa
Amai: Anesa Lipa
Vanun'una: Rina (hanzvadzi)
Mukomana: Isaac Carew naPaul Jason Klein (Ex-vakomana)
Anwar Hadid (Iyezvino mudiwa sa2021)
Net Worth: $ 16 mamirioni (2021 Stats)
Zvipfuwo: Dexter (imbwa)
kukwirira: 1.73 m (mashanu tsoka 5 inches)
Tichinyatsoisa memoir yaDua Lipa, takaona kuti nhoroondo yemhuri yake ndiyo yakazonyanya kuratidza zviroto zvake. Ehezve, ivo vaviri vabereki vake uye vanun'una vanofanirwa mamwe marumbidzo ekumubatsira kuzadzisa kwake kwehuvana chishuwo.
Iwe unobvumirana nesu kuti kuzvipira kwake uye positivity zvinokodzera zvese mibairo yaakakunda. Kusvika parizvino, nguva dzinobwinya dzaakagamuchira mubairo weGrammy dzaizoramba dzichitenderera kuburikidza nepfungwa dzemhuri yake yese.
Ndatenda nekuverenga ichi chidimbu chekubata zvemukati nezve Dua Lipa. Nomutsa taura nesu kana iwe ukawana chero chinhu chinoita senge chisiri chakakodzera nenyaya yedu.